Ndị na-eme mmanu griiz, ndị na - ebubata ya - China Griiz Factory
Petroking Aluminom Griiz 4.5kg Plastic ịwụ
Petroking Griiz White Aluminom Griiz
Petroking Calcium Mgbanwe Griiz Mepee Griiz
Anhydrous Calcium griiz na e mepụtara na-eji site na lubrication usoro n'okpuru ala na-ajụ okpomọkụ. Ya anhydrous calcium thickener, jikọtara ya na a elu isi mmanụ viscosity, na-enye ndị magburu onwe mmiri na-eguzogide na stickiness na-ebupụta nakwa dị ka ezigbo mma mgbochi eyi Njirimara.
Ezigbo mgbapụta-ike na ala na-ajụ okpomọkụ.
Ezigbo nguzogide mmiri na nchebe corrosion.
Magburu onwe mgbochi eyi Njirimara.
Ezigbo adhesion na-ebupụta.
Petroking Calcum Dabere Griiz maka Plastic Gears
Petroking Ep2 Ep3 Lithium Griiz 17kg Pail
Oke Nsogbu Griiz bụ mmanụ ịnweta, lithium ncha na-eme ka griiz nwere nnukwu ihe mgbakwunye. Nke a griiz na-enye ezigbo mmanu n'ozuzu ngwa doro ọnọdụ siri ike na ịma jijiji.
Magburu onwe n'ibu kwụsie ike 、
Kemgwucha ezi corrosion inhibiting Njirimara ...
Ezigbo arụmọrụ EP
Petroking Excavator Griiz Lithium Griiz Ep2 Cartridge